Saadaasha hawada ee shabakada waa shabakad ku takhasustay faafinta saadaasha hawada, cilmiga cimilada iyo cilmiga kale ee la xiriira sida Geology ama Astronomy. Waxaan ku faafineynaa macluumaad adag oo ku saabsan mowduucyada iyo fikradaha ugu habboon adduunka sayniska waxaanan kula socodsiin doonnaa wararka ugu muhiimsan.
Kooxda tifaftirka ee Meteorología en Red waxay ka kooban tahay koox ka kooban khabiir ku ah saadaasha hawada, cilmiga cimilada iyo cilmiga deegaanka. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Ka qalinjabiyey cilmiga deegaanka iyo Masterka ee barashada cilmiga deegaanka oo ka socda Jaamacadda Malaga. Waxaan baranayay saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada ee tartanka mar walbana waxaan jeclaa daruuraha. Boggan waxaan isku dayayaa inaan ku gudbiyo dhammaan aqoonta lagama maarmaanka ah si aan wax yar uga fahmo meeraheenna iyo shaqeynta jawiga. Waxaan aqriyay buugaag farabadan oo kusaabsan saadaasha hawada iyo dhaqdhaqaaqa jawiga anigoo isku dayaya inaan kuqabto dhamaan aqoontaan qaab cad, fudud oo madadaalo leh.
Anigu waxaan ahay cilmiga cilmiga dhulka, Masterka cilmiga Juquraafiga iyo Saadaasha Hawada, laakiin waxaas oo dhan waan jeclahay cilmiga. Akhristaha joogtada ah ee joornaalada cilmiga shaqada sida Sayniska ama Dabeecadda. Waxaan ka sameeyay mashruuc ku saabsan seismology-ga Volcanic oo waxaan kaqeyb qaatay dhaqammada qiimeynta saameynta deegaanka ee Poland ee Sudetenland iyo Beljamka ee Waqooyiga Badda, laakiin wixii ka dambeeya samaynta suurtagalka ah, volcanoes iyo dhulgariirku waa hamigeyga. Ma jiraan wax la mid ah masiibo dabiici ah oo indhahayga furaysa oo aan kumbuyuutarkeyga ku xirnaanayo saacado si aan wax iiga sheego. Saynisku waa shaqadeyda iyo hamigeyga, nasiib daro, maahan mihnaddeyda.
Waxaan ku soo barbaaray baadiyaha, anigoo wax ka bartay wax kasta oo hareerahayga ku jiray, abuuristana isbarbar dhig dabiici ah oo u dhexeeya waaya-aragnimada iyo xiriirkaas dabiiciga ah. Markay sannaduhu sii socdaan, kama caawin karo laakiin waan ku faraxsanahay isku xirnaantaas aan dhammaanteen ku dhex wadno adduunyada dabiiciga ah.
Magacaygu waa Antonio, waxaan haystaa shahaadada cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga sayniska (Geology), waxa kale oo uu Master ka yahay injineernimada madaniga ah oo laga codsaday shaqooyinka madaniga ah iyo sidoo kale Masterka cilmiga dhulka iyo saadaasha hawada Waxaan u shaqeeyay sidii aqoonyahan cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga iyo cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga dhul-baarista cilmiga dhulka (geologist) iyo qoraa warbixin jireed. Waxaan sidoo kale sameeyay baaritaanno micrometeorological ah si aan u barto dhaqanka jawiga iyo dhulka hoose CO2. Waxaan rajeynayaa inaan wax ku biirin karo hadhuudhkeyga ciid si aan u sameeyo anshax marinta xiisaha leh sida saadaasha hawada oo aad iyo aad ugu faa'iideysata qof walba.